८ घण्टा काममा दलाएर महिनाको १५ हजार, दिनको ५७७ रुपैंया दिन निजी क्षेत्रलाई किन गाह्रो ? - Gandak News
८ घण्टा काममा दलाएर महिनाको १५ हजार, दिनको ५७७ रुपैंया दिन निजी क्षेत्रलाई किन गाह्रो ?
गण्डक न्यूज द्वारा २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:३५ मा प्रकाशित 0
मासिक १५ हजार, दैनिक पारिश्रमिकमा ५ सय ७७ रुपैयाँ, घण्टाको हिसाबले काम गर्ने श्रमिकले ७७ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ तोकिएको थियो ।
आफूहरुको सहमति बिनै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट बनेका हुन् । सरकारले एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको उनीहरुको आरोप छ ।